GARDEN AZALEA: SIDA LOO ABUURO IYO DARYEELKA EE KU XOORTAY GEEDIHII - WARSHAD ORNAMENTAL KORAYA
Sida loo koro azaleas beerta, beerto iyo daryeelidda warshadda
Azalea waa dhir diiran oo dabiici ah oo ku faraxsan ubax, haddii si habboon loo raaco, dooro meel wanaagsan oo beerta ah, hubi inaad waraabiso habboon iyo quudinta. Azalea waxay dareemeysaa raaxo leh sheyga isku dhafan ee kala duwan (iyadoo ku xiran nooca warshadda), laakiin ma aha inay hoos u dhigto hooska adag. Waxay faragelin doontaa ubax wanaagsan. Waxay jecelyihiin goobaha dhirta halkaas oo ay jiraan qoraalo. Ha ku faraxsaneen oo dhulka qalalan. Waxaad u baahan tahay inaad doorato meel bannaan oo ku taal goobta, halkaas oo ay dhici doonto daadad goosi ah. Markaad guriga soo degto, waxaad dooran kartaa derbi, marka laga reebo koonfurta. Dhirta deriska ah ayaa la cuni karaa, iyo sidoo kale kalluun iyo oak. Waa hagaag, hadii xiga warshadani waxay noqon doontaa kaydka.
Azalea ma dhiman doono qorraxda, laakiin waxay si xun u ubaxeysaa. Qorraxda tooska ah waxay u nugul tahay koritaanka fiican iyo ubax beerta azaleas. Haddii ciidda ay qalalan tahay, ka dibna muddada ubax, dhirta ayaa bilaabi doonta walwalka, mana aha macno in la sugo natiijooyin wanaagsan. Haddii, si kastaba ha ahaatee, dhirtu waxay heshay meel qorrax leh oo qallalan, markaa waa lagama maarmaan in la qoydo dhirta iyo ciidda si fiican.
Sida loo abuuro azalea
Sida loo doorto geedo azalea
Iibsashada dhogorta ayaa suurogal ah oo kaliya guga. Markuu dooranayo, waxaad u baahan tahay inaad fiiro gaar ah u yeelato mugga weelka. Way fiicantahay haddii ay weyn tahay. Dhulka waa in uu ahaado mid si wanaagsan u qulqulaya, qiyaasta loo baahan yahay (ma yar). Dhulka qalalan ee weelka waa calaamad muujinaysa saboolka, jiran, iyo dhirta daciifka ah. Go'aaminta tayada qandhaynta waxay isticmaali kartaa mashiinka keliya. Dhiiga ayaa si sahlan loogu jiidi karaa dheriga. Haddii ay si fiican u socoto oo si sahal ah leh clod ah ee dhulka, ka dibna tani waa calaamad xun - dhirta ayaa xidid xun ku dhacay. In beerta, sida seedling ah, sidoo kale, ma degi karaan hoos. Warshadu waa inay sidoo kale u muuqataa mid caafimaad leh oo xoog leh.
Waxaa jira noocyo badan oo azaleas ah. Marka aad iibsaneyso, waxaad u baahan tahay inaad tan tixgeliso. Iyo in aad hesho dhammaan macluumaadka ku saabsan kooxda taas oo dhirta ay leedahay, oo raadso sifooyinka ay leedahay. Noocyada kala duwan waxay u dhaqmi karaan si kala duwan waxayna u baahan yihiin habab kale oo lagu daryeelo.
Tixgeli nooca carrada ee goobta loo qorsheeyey. Loam iyo carrada cagaarka ah ayaa ah xulashooyin xun. Geedka waxaa laga yaabaa in aan la aqbalin ama dhakhso u dhicin. Haddii, dhulka duurka ku yaal ee azalea, ciidda ayaa u muuqda mid aan ku guulaysan, booskuna wuxuu u muuqdaa mid ku habboon, ka dibna waxaad bedeli kartaa lakabka sare, adoo tixgelinaya doorashooyinka dhirta. Waxaad iibsan kartaa isku dar ah dhulka si noocyada noocyada dhirta, iyo sidoo kale isticmaali diyaargarow gaar ah. Carrabku waa inuu dabacsan yahay oo bacrin ah. Haddii ciidda waa alkaline, ka dibna waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo sariir culus, isticmaal peat ama isku dar ah dhirta kuwaas. Haddii aad iska indho-tirto rabitaankan, dhirta waxay noqoneysaa hurdi ama aan la qaadin.
Wixii azaleas, carrada acidic waa mid ku habboon. Ma aha inay qalalan tahay, haddii kale ubaxyada ayaa si liidata loo abuuri doonaa, isla markaana si dhakhso ah u qalaji doonaa. Haddii ciidda u muuqatay inay sidan u tahay, waxaa lagama maarmaan ah in la hubiyo qoyaan wanaagsan. Iyadoo la'aanta waxyaallaha, ciidda waa in ay si wanaagsan u nafaqo leh hab gaar ah. Wixii dhirta cuntada waa inay isticmaashaan humus, peat, masti, shoog.
Habka beeraha Azalea
Beerta geedaha azalea laga soo qaadaa weelasha guga ama xagaaga. Meelaha qotada dheer ee cawsku waa 50 cm, dhererka ceelka waa 70 cm, ama, waxaa suurtagal ah in lagu xisaabiyo qoto dheer oo ku saleysan xajmiga xididka leh dhoobada dhulka leh, oo lagu daro 15 sentimitir. Ujeedooyinkaas, isticmaalka lebenkii burburay iyo ciidadu waa doorashada ugu fiican. Kaliya ma qaadan kartid xumbada.
Heerka miisaanka dheecaanku waa inuu gaaraa 20 cm, godadka qotodheer wuxuu ka sii daraa lakabka dufanka. Lakabka xigta waa peat iyo ciid. Shinnida lafteeda waa in lagu wada beeray buro dhul ah oo ay ku korortay. Ha ruxin dhulka. Qoorta Asalea waa in aan laga buuxin ciid.
Marka xigta, tag si toos ah beerto ee sapling iyo waraabiyo. Qallajinta agagaarka dhirta sidoo kale waa lagama maarmaan. Ujeedooyinkaas, waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho cirbadaha geed, jejeb, peat, jilif la jajabiyey ama caleemo. Tani waxay fursad u siinaysaa in lagu ilaaliyo qoyaanka, taas oo ay lagama maarmaan u tahay azaleas, iyo sidoo kale ilaalinta xididdada warshadda ka soo cayayaanka iyo iftiinka qoraxda. Nidaamkan waa in si joogto ah loo qabtaa.
Garden Azalea: Sida loo daryeelo ubax
Sida loo dheriyo azalea beerta
Azalea waa geed geed oo u baahan waraabin badan iyo qoyaan. Laakiin waa inay tixgelisaa nooca carrada iyo meesha lagu beeray. Haddii dhulka uu qalalan yahay taabashada, ka dibna waraabinta waa lagama maarmaan. Waxaad u baahan tahay inaad ku buufisid geedkii badiyaa, waxaadna ku shubi kartaa weel biyo ku xigta. Isku waraabinta waa suurtogal in la mid ah carrada caamka ah ama lagu buufiyo. Inta lagu jiro waraabinta ubax waa in ka sii badan. Ka dib dhamaadka muddada ubax, buufinta ma aha daruuri. Waxa kale oo lagama maarmaan ah in la yareeyo biyaha oo dayrta. Muddadan, qoyaanka waa ku filan. Muddada ka horreysa bilawga jiilaalka, biyaha waa in la waraabiyaa oo keliya cimilada qalalan si aysan u kala-sooc lahayn.
Noocyada quudinta dhirta
Cunto yaraleosa waxay u baahan tahay horeba saddex toddobaad kadib markii la beeray. Kadibna ku cel-celinta hababka waa in lagu celiyaa si joogto ah saddexdii usbuucba. Wixii koritaanka wanaagsan iyo dhirta ubax u baahan tahay in la isticmaalo biyo acidic, kaas oo la waraabiyo azalea bil kasta.
Dharka ugu sareeya waxaa la sameeyaa horraanta gu'ga, inta lagu jiro muddada ubax iyo isla markiiba ka dib dhamaystirka. Wixii ku habboon ee fosfooraska-potassium ku habboon bacriminta. Humus waxaa kale oo loo isticmaalaa awoodda azaleas. Waxaa lagu waraabin karaa faleebo mullein ah. Taas awgeed, xididdada warshadu waxay helaysaa dhammaan walxaha lagama maarmaanka u ah si loo xaqiijiyo koritaanka wanaagsan iyo ubax badan ee ubaxyada. Bacriminta ma u baahan yihiin asal ahaan lafdhabarkiisa, laakiin meel fog ka soo jeedo bartamaha. Qeybaha bacriminta dagaalku ma saameyn doonaan nidaamka asaasiga ah. Inta lagu jiro duurka abaarta waxay u baahan yihiin in la sii buufiyo. Dhirta dhalinyarada ah waxay u baahan yihiin bacarimid leh Bacriminta fosfate ee muddada guga horraanta illaa xagaaga.
Tayada tayada waa xaalad muhiim u ah korniinka iyo ubax ee azaleas. Xulashada ugu wanaagsan waxay noqon kartaa ciidda acidic ah. Haddii ciidda ugu dambeyntii hoos u degto, ka dibna waxaad u baahan tahay inaad ku shubto iyo mulch kale. Ha u daboolin dambaska carrada, oo isticmaal bacriminta ay ku jiraan koloriin iyo lime. Waxaan sameyn karnaa jaridda geedaha. Laakiin sababta oo ah ma aha inaad isticmaasho hoe, sababtoo ah nidaamka xididka geedka waa mid aad u muuqda, oo aad dhaawici karto. Laakiin waxaa habboon in laga saaro haramaha.
Xeerarka loogu talagalay manjooyin azaleas beerta
Laba toddobaad ka dib dhamaadka ubax, azalea waxay u baahan tahay in la nadiifiyo caleemaha xad-dhaafka ah iyo caleemaha. Waxaa lagama maarmaan ah in la gooyo caleemaha kuwaas oo soo daatay. Waxaad u baahan tahay inaad ka saarto laamaha dheeraadka ah ee dhirta dhoobo. Caleemaha noocan oo kale ah waxay u baahan yihiin in la gooyo gebi ahaan, midka kalena saddexaad. Gooyaa waa in la fuliyaa baadiyaha oo dhan, ka dibna dhirta dhirta waa la keydiyaa. Dhamaadka qaybaha jarista waxaa lagu daaweeyaa rinjiga ama garoonka beerta. Si aad u bilowdo horumarinta ubaxyo cusub, waxaad u baahan tahay inaad ka saarto qadiimiga, qalajisay.
Kala saarista geedkan wuxuu dhacaa xagaaga, sidoo kale waxaad samayn kartaa bilowga ama dhexda guga. Waxaa soo saarey gooyn ama abuur. Si aad u hesho azaleas dhalinyarada wanaagsan, waxaa lagama maarmaan ah in la gooyaa gooyn ka soo warshad weyn (10 cm dheer). Waxaa lagu jarjaraa xayawaan 45 darajo. Waa lagama maarmaan in la isku xiro cirbadaha ama samaynta isku dar ah dhulka oo leh ciid iyo peat. Gooynta geedkii waxaa lagu beeray carradaas acidic ah, isagoo intaa ku daray kiciyaha loogu talagalay koritaanka dhirta ka fiican. Geedo cusub lagu beeray waa in lagu daboolaa dhalada. Gooynta u baahan tahay waraabinta joogto ah. Waayo rooting waxay u baahan yihiin laba bilood. Heerkulka raaxada ee koritaanka iyo horumarinta dhirta dhallinyarada - 20 digrii. Qoyaanka hawada - 80%. Waxa kale oo ay u baahan yihiin hawo qaadasho. Waa inay qaataan bil iyo badh ka hor inta aanay suurtagal ahayn inay dhirta dhirta ka dhigaan dhul furan.
Wixii soo saarista miraha azalea waxay qaadan doontaa waqti badan. Dhulku waa suurtogalnimo sanadkiiba. Seeds waxaa lagu beeray weelasha, daboolay dhalooyinka ama filimada, la socoshada hawada iyo qoyaanka ciidda oo fiican. Ka dib markii miraha Gagaashan, waxay dhumiyaan oo fadhiisan. Waxaad daadi kartaa warshadda adoo kala qaybin kara baadiyaha. Nidaamka waxaa lagu fuliyaa guga. Sidaa darteed waxaad u baahan tahay weel daboolan. Waxay kala qaybisay qayb ka mid ah baadiyaha iyo lagu shubay meeshii la doortay. Warshad waalidku waa in ay ahaato mid si ku filan loo horumariyo, iyada oo nidaam xidid wanaagsan leh, ugu yaraan laba caleemo.
Sida loo badbaadiyo azalea xilliga jiilaalka
Si aad si guul leh uga adkaato jiilaalka qaboobaha qaboobaa waxay u baahan tahay in la isticmaalo mulch, sii kordhiso lakabka si 5 cm. Nidaamka waxaa la sameeyaa xilliga dayrta ama dhexda deyrta. Waxaa jira noocyada yaraleas ee u baahan guriyeyn khatar ah oo jiilaalka ah iyada oo la adeegsanayo laanta lo'du iyo burka. Lafaatiirta noocyo kala daadsan ayaa u muuqda dhulka, waxay ku xiran yihiin silig iyo daboolay. Wixii xayawaan ee xayawaanka dhoobada ah waxay u baahan yihiin shey, kaas oo alaabta daboolka la dhigo. Kaliya waa in la sameeyaa marka ay qabow tahay. Haddii kale, ubaxyada guga way xumaan doonaan.
Noocyada kale waxay adkeyn karaan dhaxan daran ilaa 30 darajo. Waxa kale oo suurtogal ah in lagu daboolo warshadda leh polyetylen. Xaaladdan, waa in maskaxda lagu hayaa in jiilaalka uu noqon karo mid qoyan. Kadibna hoyga wuxuu ku siinayaa suurtogalnimada ka saarista qoyaanka. Haddii aadan u hoggaansamin qaanuunkan, azalea way kala jabi kartaa ama jiran kartaa. Warshad ayaa ka baxaysa gobolka xilliga qaboobaha ka dib barafka dhalaalay. Guga hore, ka dib baraaruga geedka, qorraxda ayaa gubi karta asliga ah, tani waxay sidoo kale u baahan tahay in la tixgeliyo.
Vitamiin for digaagga broiler